Ndokwa obodo → (urbs - obodo). Gini bu ime obodo? Nkọwa • Ọmụmụ
obecnie ime obodo bụ otu n'ime sayensị kachasị mkpa mgbe mmadụ tụlere etu ọnụọgụgụ ụwa mmadụ bi na gburugburu obodo ugbu a. N’afọ 1800, ihe karịrị pasent 2 nke ndị bi n’ụwa bi n’obodo.
Ka ọ na-erule 1950, ọnụ ọgụgụ ahụ arịgola pasent 30. Ma ugbu a, ọ gafeelarị 50%.
Ime obodo na-elekwasị anya na ịdị mma nke ndụ n'obodo, na ala ịta ahịhịa, obodo na obodo. Dị nnọọ ka dibịa kwesịrị ịma banyere sistemu eji arụ ọrụ mmadụ iji gwọọ onye ọrịa, ndị na - eme atụmatụ obodo kwesịrị ịma gbasara sistemu obodo.
Na-eme atụmatụ obodo, ndị na-eme atụmatụ ga-atụle ọtụtụ ihe gụnyere akụ na ụba, gburugburu ebe obibi, na ọdịbendị na mkpa njem. Ndị na-eme atụmatụ obodo kwesịrị ịghọta ojiji ụlọ a na-arụ ugbu a, okporo ụzọ na akụrụngwa dị n'obodo ha, yana etu ojiji ndị ahụ nwere ike isi metụta obodo n'ọdịnihu.
Atụmatụ obodo - ọmụmụ
Ndi n’atụmatụ n’obodo ndị mpaghara na-achọkarị akara ugo mmụta nna ha ukwu site na nhazi nke ime obodo ma ọ bụ mpaghara mpaghara. Enwere ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị otú ahụ na mba ahụ. Ọtụtụ n'ime ụzọ nna ukwu ahụ na-akpọrọ ụmụ akwụkwọ site na ọtụtụ majors dị ka ọdịdị ala, atụmatụ, akụ na ụba, nchịkwa ọha, sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ije ụlọ, na usoro gburugburu.
Nduzi nke ochicho n’iru - ije na nhazi obodo
Ọ bụ ntụzi aka maka onye ọ bụla maka na ihe owuwu ụlọ ya dị ka ebe dị iche iche ma sie ike. Ọzọkwa, ha kwenyere na omume ya chọrọ ma echiche zuru oke banyere okwu ahụ na ọtụtụ ọkachamara na ikike ya.
Ihe omume a nwere ike inwe na akuku omumu a na-ekpuchi otutu uzo, site na ihe omumu banyere akuko nke ihe owuwu, ihe omuma, ihe omumu, ihe omuma, na nhazi obodo na omumu ihe omuma.
Ihe ọmụmụ ndị a ga-agụnye akụkụ ndị dị ka imewe, ịrụ ọrụ na ọdịnihu nke mpaghara obodo. Sayensị a dabere na ọrụ ede, ihe osise na ọrụ atụ nke na-esite n'ihe gbasara ụkpụrụ echiche obodo mepere emepe na narị afọ nke iri abụọ. Isiokwu na nkuzi agbadoro n’iru mmepe mmepe obodo.
Ime atụmatụ ime obodo na nhazi ihe
Ndị na-eme atụmatụ ime obodo na-arụ ọrụ na ndị injinia, ndị na-ahụ maka ụlọ na ndị mmepe iji mepụta ma dozie ụlọ dịka iwu nke mpaghara mpaghara ọ bụla. Mpaghara a dị mkpa n'ihi na ha na-ekpebi otu enwere ike iji oghere dị iche iche. Factorylọ ọrụ na-eme mkpọtụ enweghị ike ịdị na-ebi. Kama nke ahụ, a ga-ewu ụlọ ọrụ ahụ na mpaghara mepere emepe.
Na mgbakwunye na atụmatụ mpaghara, ndị na-eme atụmatụ obodo na-ahụkwa ihe nlere obodo.
Nke a pụtara na ha na-ebu amụma ụzọ obodo, mpaghara ma ọ bụ mpaghara ga-adị ka ọ na-abawanye.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ndị na - eme atụmatụ obodo mepere atụmatụ ịzụ ahịa maka ịchọ mma, ha nwere ike idebe iwu nke ọ ga - agbaso. Iwu ndị a nwere ike ịchọpụta ụdị ụlọ ihe eji arụ ọrụ, dịka brick ma ọ bụ stucco.
Atụmatụ aestetiiki nwekwara ike ịgụnye chọrọ maka ụzọ mbata ụgbọ ala, osisi na mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, yana ụdị ihe odide na ọkụ a na-eji akara ndị ahụ.
Mgbapụta ala, ụlọ na-ahụ maka nkà na ụzụ, injinia na onye mepere emepe - ha niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta mpaghara jikọrọ ọnụ.
Ime obodo mepere emepe na-eme ka mpaghara zoro ezo ma ọ bụrụ na ọ kpatara nsogbu.
Mara mma na minimalist na-adọba ụgbọala ha na aru oru abuo.
Ha na-egbochi ndị ọkwọ ụgbọala ibubata ụgbọ ala ha gaa mpaghara ọzọ ebughi maka nke a, ọbụlagodi ma ha amaghị obodo ahụ nke ọma.
Ọzọkwa, ha na-eme ihe anya ndị na-agafe agafe, oge na-aga, ha na-aghọ ihe amata ama gbasara oghere obodo.
Nhazi ime obodo ohuru na-agbakwunye agwa ohuru n’atụmatụ ime obodo
Ọhụụ mepere emepe bụ mmemme bidoro na United States na mbụ wee bụrụ onye amara ama ama gburugburu ụwa n'ime iri afọ ole na ole gara aga. Ọ bụ mmegharị na-akwalite ije n’etiti ndị bi na iche-iche nke agbata obi na-eme enyi na gburugburu.
E nwere ọtụtụ ụkpụrụ dị mkpa na ihe dị iche iche agụnyere na echiche Urbanism Ọhụụ.
Planningme atụmatụ na imepe ala na ụlọ na atụmatụ nke gọọmentị ime obodo na mpaghara esonye na echiche nke New Urbanism. Ọ bụ echiche ndị mmepe nwere ike ịnakwere otu ụlọ ma ọ bụ iwu ụlọ obibi.
Nke nta nke nta, mmepe ime obodo ọhụrụ na-abụzi ụkpụrụ nke atụmatụ na mmepe obodo.
Echiche nke mmepe obodo mepere emepe siri ike ma nweekwa ike ibi n'ime obodo ebe enwere mmiri, nri na ume ike.
Ike inwere onwe ya na-abawanye uru maka ndi n’eto obodo na ndi ochichi.
Imezu ebumnuche ebumnuche obodo ndụ, akụ na ụba, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke mmekọrịta nwere ike ị nweta ebumnuche ebumnuche, nke ndụ ga-abawanye uru.
Echiche nke mmepe na-adigide na obodo ibi ndụ na-anọchi anya nnukwu ọhụụ nke atụmatụ ime obodo na mmepe na-adigide.
Agbanyeghị, ịghọta ọhụụ ndị a ma ama nwere ike iche ọtụtụ ọgụ n'ihi esemokwu nke ndị nwere mmasị.
Usoro iji nweta mmepe obodo mepere emepe nwere ike ịchọ mmụta site n'ihe ịga nke ọma na mmejọ ndị gara aga iji chọpụta ihe bụ ezigbo omume.
Odida obodoChitelọ na atụmatụ ime obodoodida obodoala idozi atụmatụ ime obodoime obodogini bu nhazi obodoihe eji eme obodoakụkọ ihe mere eme nke ijeime obodo ọhụrụọhụrụ mepere emepe atụmatụ ijeobodo mepere emepe ohurundị nhazionye nhaziimewe obodoụdị ụlọ arụmọrụ ime obodoonye na-ese uloSociety of Polish Town Plannersndị nhazi obodoime obodoime obodonkọwapụta atụmatụ ime obodoAma atụmatụ obodoihe omumu banyere ime obodo